Shona - We Are Survivors
Munhu mumwe neumwe ane kodzero yekuva nehupenyu hwakanaka. Hazvinei kwamunobva kana kuti wakambosangana nei muupenyu”Tiri Vaponi” chirongwa chakaparurwa muSweden kuti chibatsire vanhu vemhando dzakasiyana siyana vachangopinda muSweden.Zvichisanganisira vane HIV uye ngochani.
ZVAKAKOSHA KUZIVA PAMUSORO PEHIV
Vanhu vanosvika zvuuru zvinomwe vari kurarama vaine HIV muSweden. Gore negore vanhu vanosvika mazana mashunu vanobatwa nechirwere cheHIV vototanga kurapwa.Vaye vanoongororwa nguva ichiripo vopihwa mishonga yavo iriko mazuva ano,vanorarama upenyu hwakareba nehutano hwakanaka. Kushanyira machiremba eHIV, uye mishonga yeHIV nekuongororwa ropa kwacho zvese izvi zvinoitwa pachena pasina mari inodiwa muSweden.Machiremba nevapirikiri vakatsidza nekunyora pasi kuti havafumure ruzivo rwevarikurapwa uye kuva neHIV hazvidzingise vapoteri vari muSweden kudzokera kumisha yavo. MuSweden kuva nechirwere cheHIV hazvitadzise munhu kuti abudirire madonzvo eupenyu hwake.
HIV zvinomirira Human Immunodeficiency Virus,zvichireva kuti chirwere chinowanikwa nevanhu. ”Human” zvinoreva kuti chirwere chinobata munhu. ”Immunodeficiency” zvinoreva kuti kukanganiswa kweutano hwenhu nechirwere. ”Virus” zvinoreva utachiona hwechirwere asi mazuva ano kune mishonga irikukwanisa kumisa mabhakitiriya eHIV kuti asa kuvadze utano hwevanhu.Hakusati kwawanikwa mishonga yekupedza HIV asi munhu anokwanisa kurarama achimwa mishonga yake sevarwere veshuga kana BP.
Vanhu vakawanda havambooneke kuva nezviratidzo zveHIV. Vanhu vakawanda havambozvione kuti pane chiripo. Vamwe ndivo vanodzimbikana nemuviri kwevhiki mbiri,vachirutsa uye muviri wese uchipisa.Nzira badzi kuti uzive paumire pamusoro pezveHIV kuongororwa ropa rako kumachiremba.
Kana HIV ikasarapwa zvinokonzera kuti munhu ave nechirwere cheAIDS. Utachiona hweAIDS unoita kuti maT-masero anofungidzirwa kuti anodzivirire muviri pamusoro utachiona uye gomarara kuti aparare. AIDS iri izita rineukama nezvirwere zvakawanda. Vanhu vakarapwa nguva iripo hazvizoite kuti vabate AIDS.
HIV INOPARADZIRWA SEI?
Vanhu vose – zvisinei munhurume, zera kana waunosarudza kurara naye pabonde- vanogona kuwana HIV. HIV inoparadzirwa chete kana munhu asingagamuchiri mishonga yaakapihwa kuchipatara. Mushonga weHIV unopa upenyu urefu mukuburikidza nekumwa zuva nezuva,zvichireva kuti kana uchirapwa nemazvo haukwanise kutapurira mumwe wako. HIV ikasarapwa,pane nzira nhatu dzainokwanisa kutapurirwa nayo:
HIV inogona chete kuparadzirwa:
• Bonde risina kudzivirirwa nemakondomu,zvingave bonde reshure,kana remberi kana bonde remukanwa
• kuburikidza yakadyidzana tsono uye zvinobaya zvingave zviine utachiwana
• kubva kuna mai nemwana panguva yepamuviri, panguva mwana anozvarwa kana paye mwana anenge achiyamwiswa.
Njodzi yeku paradzira HIV inoitika mumwedzi mishoma pashure watapurirwa HIV. Panguva iyoyo utachiona hwe HIV hune huwandu muropa chaizvo, panguva iyoyo vanhu vazhinji havazive kuti vane utachiona uye naizvozvo vanogona kuparadzira kune vamwe vanhu. Mukana wekutapurira unokurazve kana munhu aine zvirwere zvepabonde.
KUDEREDZA HUTAPURIRI HWEHIV
Kushandisa kondomu ndiyo nzira yokuratidza kuremekedza uye hanya nemudiwa wako zvichidzivirirawo HIV nezvimwe zvirwere zvepabonde. Makondomu anodzivirira zvirwere zvepabonde uye HIV.Kana vanhu vachiita bonde nhengo yemukomana kana musikana inofanirwa kupfekedzwa kondomu.Kwete kugoverana majekiseni kana zvimwe zvinobaya nekuti unogona kutapudza kupararira kweHIV. Kunze makondomu, kurapwa HIV uye kuongororwa ropa nguva nenguva zvinhu zvinobatsira kushomeka kweHIV.
WAKAMBOONGORORWA HIV HERE?
MuSweden, kuongororwa nechiremba,kana kupihwa mishonga yeHIV zvese izvi zvinoitwa pachena.Hapana mari inodiwa.Unokwanisa kungoenda kuchipatara chiri padhuze newe wongosiya ropa kuti riongororwe uye unogogona kusasiya zita rako. Machiremba neva vaturikiri muSweden vanowanzotevedzera nemazvo pakavanda havagoni kuzivisa kune mumwe munhu kana uine HIV kana ngochani.
Zvakakosha kuti uongororwe ropa rako. Zvinoita kuti kana uine chirwere unorapwa nguva iripo uye hauzotapurire vamwe chirwere ichi.
KUSHANDISA MISHONGA NAMAZVO
Mazuva ano kune mishonga inobatsira chaizvo kurapwa HIV.Mishonga iyi inoita kuti muviri wemunhu ane HIV urambe wakasimba asabatwe nezvirwere zvakasuyana siyana. Kuti mushonga ushande unofanira kutora mapiritsi ako zvakanaka zuva nezuva rese reupenyu hwako sekutaurirwa kwawakaitwa nachiremba wako.
Nekuda kweruzivo uye mishonga,nhasi vanhu vanogona kurarama upenyu hwakareba neHIV. Kurarama nehutachiwana hweHIV kunoreva kugara nechirwere chisingaperi uye kumwa mishonga nemazvo kuti urarame kwenguva refu. Hapana mushonga unorapa HIV asi mishonga iriko inoita kuti vanhu vane HIV vasabatwe nechirwere cheAIDS. Mishonga iriko mazuva ano inoita kuti chirwere cheHIV chisatapurirwe kune vamwe vanhu uye utachiwana hwacho unogona kusara usisaonekwe mumuviri mumunhu anomwa mushonga nenzira kwayo.HIV hachisi chirwere chinotyisa uye hachiuraye chikarapwa nenzira kwayo. Munhu wose anogara muSweden aine HIV ikodzero yake kurapwa pachena pasina mari inodiwa.
Nekuda kwemishonga vanhu vanorarama upenyu hwakanaka uye unokwanisa kuenda kubasa rako, kufara neshamwari uye kuita zvinokuvaraidza zvemoyo. Unogona kuita bonde nemumwe wako asi unofanira kushandisa kondomu woudza mumwe wako kuti ukurarama neHIV.MuSweden haumanikidzwe nemutemo kutaurira vaunoshanda navo kana hama neshamwari kuti une HIV.MuSweden hapan mupoteri anodzingirwa kuva neHIV kana kuva ngochani.
NHAURIRANO PAMUSORO PEHIV
Dzimwe nguva zvinogona kuva zvakaoma kuudza shamwari dzako nehama kuti une HIV. Kana uchida kuudza mumwe munhu uye kuwana rubatsiro uye rutsigiro, wakasununguka kunyorera kana kuchaya runhare pane masangano ari pazasi pepeji. Masangano aya anokwanisa kukubatsirai nemhuri dzenyu kukurukura matambudziko amusangana nawo mukurarama neHIV.Masangano aya hunyanzvi hwavo vanopa pachena hapana mari inodiwa uye vanoziva kuchengetedza nhaurirano dzenyu,hamumbofumurwe kune vamwe vanhu.
Sources: www.folkhälsomyndigheten.se/radochfakta, www.1177.se, Noaks Ark, Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige, rfsl.se, Hiv-Sverige.
Medical review: Hiv-Sverige
Rusaruro uye nezvemhosva siyana munharaunda zvinoreva kuti vakawanda LGBT(Ngochani) havafaniri kuedza kuva vakavimbika pamusoro kwavo zvepabonde kana kuti vane HIV. Izvi zvinoreva kuti vanhu vazhinji vari kurarama upenyu huviri zvinogona kutungamirira zvose hwepfungwa uye hwomuviri hwakanaka. Ndicho chinhu RFSL Dalarna inoda kuchinja.
TINOWANIKWA PEDO NEKWAURI
RFSL Dalarnas basa rayo huru kuzivisa uye kuva munhu anoyemurika kuvanasikana LGBT(ngochani) uye kushanda pamusoro rusaruro, kusaziva uye kutya munyika. Kuparadzira mashoko pamusoro HIV / AIDS nezvimwe zvirwere zvinopomeranwa pabonde (STDs) iri zvinosanganisirwa sechinhu chinokosha kwedu mabhizimisi. Kakawanda, isu tave noupenyu Muchengetedzi nokuda LGBT(ngochani) nokuvabatsira zvishoma nezvishoma asi zvirokwazvo uvake ushingi, simba uye zvinhu pachena.
SARUDZO YEKUDA MUNHU WAUNODA HAINGAVA MHAKA.
Kuwedzera kwatinoita nevamwe, isuwo tiite mishandirapamwe, pamwe nezvikoro, ita vechidiki nhumbi uye mubatirire Nokuzvikudza Parade pamwe Falu Kudada. Nesuwo kushanda enyika dzomunharaunda kupa ruzivo uye Advocacy mune zvose mumaruwa uye makanzuru. Zvose zvatinoita nechinangwa kuvandudza kwahwo LGBT(ngochani )uye vanhu vane HIV muDalarna.
KuRFSL Dalarna munhu asiri purofiti uye akazvimirira enyika gurukota reRFSL. Musangano wedu nguva iri muimba yedu, apo tiri kuchengeta putugadzike manheru, mharidzo, firimu s, misangano waachangoroora uye tudyiwa dyiwa.. Pano, unogona kukwereta mafirimu, mabhuku, uye kuwana makondomu pachena uye mafuta. Unogonawo kubvunza pamusoro HIV uye uzive munowanepi vaedzwa, mahara uye anonymously.
HIV-Sweden ndiyo vose vapenyu pamwe HIV uye nemhuri dzavo kuSweden, zvisinei kuti uri uye kwaunogara. Tinofunga wose anofanira kuva akaenzana kuwana kodzero dzavo uye kurarama upenyu hwakanaka HIV. Izvi ndizvo zvatiri kuramba kushanda akananga nenhengo dzedu kuSweden.
KUNE VAYA VAKURARAMA NEHIV
Munhu anogona kubata HIV – nokuti tiri tose reHIV. Munhu wose ane basa rokubatsira uye kuderedza kupararira HIV uye kufungira nezvazvo. Angatsunga kutaura HIV neshamwari dzako, mhuri yako naye. Zvichida, pane munhu ari pedyo ndiani anobatsira kukuudza vane HIV. Nokutaura nezvazvo, zvichabatsira kuputsa runyararo uye kufungira.
KODZERO DZEVANHU DZINOTARISIRWA KUMUNHU WOSE
Munhu kodzero inokosha ndiko kukwanisa kuva pachako muupenyu zvisinei zvirwere, nokuti kusarura vanhu vanorarama neHIV nomurayiro muSweden. Tinopa zano kuburikidza Mukuru wedu uye basa redu yepamutemo vose kugara HIV muSweden. Tinoshanda vakananga paakaudza vanhu vanenge HIV pakodzero uye mabasa, emwedzi nezveHIV uye zvokurapa mberi. Tiri iripo kupindura mibvunzo yako nezveHIV.
HIV-Sweden ndiyo asiri purofiti uye akazvimirira enyika kushamwaridzana, izvo kubva 1990 rave kushanda kuvandudza upenyu hwevanhu vane HIV. Tiri nyika amburera sangano runobatanidza vanhu vanobva kwematunhu uye kworudzi bvumidzwa neshamwari uye rutsigiro vanhu vane HIV uye nemhuri dzavo.
Isu zvinopa pamutemo mazano, mashoko, kushambadzira uye rutsigiro panguva senyika, nokuti ruzhinji, vanotonga uye vezvematongerwo enyika kuti nguva dzose kuvandudza kodzero dzevanhu vanorarama neHIV. Unogona kuverenga zvakawanda nezvedu, pamusoro yedu nhengo neshamwari uye zvaungaita kubatsira kuburikidza kubatana pazasi.